Mushroom pickers, uya ehlathini, ungacabangi mayelana yini ayoyenza nge amabhakede ezimbili boletus akhethiwe, ensundu cap boletus nge boletus. Ohlanganisiwe ipuleti amakhowe, amakhowe, chanterelles, amakhowe kanye amakhowe go for pickling - yonke into icacile kubo. Kodwa amakhowe ijabulise zidinga omiswe, hhayi nje omiswe bese indlela abafanelekayo, Cabangisisa kwezinhlaka okuhamba kancane inqubo, okuzoba nomphumela a amakhilogremu ambalwa eliphezulu amakhowe omisiwe. Uzodinga mushroom uya woma - sasivumela inkimbinkimbi.
Yiqiniso, abambalwa abakuthola kungaphefumuli ekhaya ngoba iphele amakhowe ngu Sublimation, futhi ngaphandle kwalokho, le ndlela kuyinto neze futhi ongenalo elimnandi, ezimangalisayo umswakama waso engokwemvelo ukhunta. amakhowe iqhwa-omisiwe abaqinile, kanzima, ziyaqothuka, futhi yebo, lizwakale limnandi. Kungokufanayo etholwe usebenzisa dryers fungal prefabricated. Izitolo enezinto zonke izinhlobo "squirrel", "umoya ezomile", "Chudesnitsa" futhi "umoya." Intengo yalezi amadivaysi uhlakaniphile ruble ayizigidi 2-4, futhi amakhowe kangangokuthi kufanelekile ukuba baphonse futhi ukuya ehlathini. Zonke ndaba ekubalekeni "izingwejeje" futhi "Chudesnitsa", okuyinto anemisila heater enamandla. Passport kumenyezelwa kakhulu ethi: "mushroom wethu uya woma ome amakhowe yakho imizuzu embalwa." Izinga omiswe sinikezwa ngesizathu inzuzo ukwamukeleka ngaphandle kokungatshazwa, kodwa ngenxa amakhowe futhi amajikijolo asikubekezeleli omiswe okusheshayo, bona shwabanisa, fihla ekushiseni, futhi ekugcineni bafe. Ngakho-ke kuyadingeka ukuba ome amakhowe indlela wawushiywe yisikhathi, lapho amakhowe nge amajikijolo ngelulela kuhovini ezibanzi Russian yomiswa khona amasonto amabili futhi ngolunye usuku. Noma dryers amakhowe futhi amajikijolo kufanele esekelwe omiswe zemvelo elangeni umoya ohelezayo.
Kodwa esithandweni Russian nhlobo, manje Cottages ngaphezulu igesi izitofu. Bese udinga ukwenza leli thuluzi, okuyinto iyoba ngumngane wakho othembekile unyaka nonyaka e omiswe amakhowe eqoqwe ehlathini. Ukuze kahle omiswe iyunifomu kuyadingeka ukuba bagcine imithetho emine. Amakhowe uthathe tincetu, cubes ekulinganiseni 2.5 ngu 2.5 amasentimitha. Amakhowe lisikiwe kuthiwa wandisa ngokulinganayo, ukuze izingcezu akazange ukugibela nomunye. Mushroom uya woma, umklamo esizokhuluma ukumboza kamuva, kufanele ibekwe ngaphansi odongeni lwendlu, ohlangothini lapho Umoya ushaya njalo. Setha omiswe kuyadingeka ngesikhathi ibambene 80 cm kusukela emhlabathini, kombhede okusezingeni eliphezulu. Futhi ekugcineni - lena kwesihenqo gauze, okuyinto izovala amakhowe izimpukane.
Mushroom uya woma elula ngokwanele, zingenziwa ngezandla zakho. Kuzothatha skeins ezimbili ngokudoba umugqa 0.8 mm, ezine lokhuni ibha kwesigaba 40 mm, ubude 1200 mm, nemishayo ezine 50 mm obukhulu, 800 mm ubude. Ngaphezu kwalokho, isidingo isitoko engagqwali izinzipho lashukumisa 30 mm for the line esisuka nezinzipho 110 mm yokuxhuma Amabha ovundlile nge izisekelo mpo. Ubude yonke imigoqo ovundlile imigqa Lihle of izikopelo ngokuzama ukushayela ukuze ikhanda kungazange kufinyelele ugodo-10 mm, futhi ibanga engu-15 mm phakathi impumulo. Uma konke Amabha ezine uyokuma imizila eqondileyo ngamakhalamu, ungaxhuma amabha struts. Kusebenza ekupheleni ibha (izikopelo up) kuya ebhasikidini at ibanga 80 cm kusukwa, nokuzama ukushayela izipikili eziningana eside. Ngakho ukwenza lonke nemigoqo. Ngenxa yalokho, kufanele uthole Uhlaka square phezu imilenze.
Mushroom uya woma izandla zakho uthole inkazimulo lapho esigabeni esilandelayo womshini kwesokudla ukudonsa line ukudoba phakathi izinhlangothi ezimbili ezilwayo ifreyimu - ukuze imigqa parallel ezilungiswe of line ukudoba iqine. Khona-ke yokwelula line ukudoba phakathi phesheya uzimele. Uma nenza kanjalo ujike miss ekupheleni line ukudoba ngokusebenzisa perpendicular imigqa, "ngamunye ngamunye". Kulokhu, ungeluka. Kodwa kungenzeka ukudonsa futhi phezu uchungechunge ekhona. It uhlala ukusungula omiswe siphelile ngaphansi odongeni ekhaya, silale amakhowe lisikiwe uzinameke gauze kwesihenqo. Sonke lesi sakhiwo uzobe kushaywa umoya, ilanga efudumele, futhi ezinsukwini ezimbalwa uzothola amakhowe kakhulu omisiwe.